Kalluumaysato Hindi ah oo Dabasho Kalluun u Tegay Webi, Balse Lacag Sabbaynaysa ugu Tegay | Togdheer News	Home
Connect on Facebook	7:48 pm | Posted by kayse Kalluumaysato Hindi ah oo Dabasho Kalluun u Tegay Webi, Balse Lacag Sabbaynaysa ugu Tegay
Kalluumaysato u dhashaay dalka Hindiya oo ka kalluumaysan jirtay webiga mara degaanka la yidhaa Guwahati, ayaa subax hore u kallahaad tegay si ay u soo kalluumaystaan, balse waxay webiga kula kulmeen lacag dul sabbaynaysa.
Kalluumaysatadan ayaa isku tuuray webiga, halka qaar kalluun sitayna daadiyeen wixii ay siteen si lacagta sabbanaysa gurashadeeda uga qaybqataan.
Ninka ugu hor arkay lacagta sabaynaysa webiga ayaa la socodsiiyey asxaabtisii inuu arkay lacag dhan 500 rubee oo u dhiganta £5 lacagta Ingiriiska ah iyo 1000 (£10) rupee oo webiga dul sabaynaya, kuwaas oo dhammaan webiga ku cararay, lana kulmay lacag aad u badan oo dul sabbaynaysa, waxaannu mid kastaa ka qabsaday intuu kari karaayey.
Mid ka mid ah kalluumaysatada oo nasiib u helay lacag dhan 1000 Rupee, ayaa wargeys maxalli ah oo Hindiya ka soo baxa u sheegay; “Dadku waxay tuureen kalluunkii iyagoo lacagtii urrursaday. Subaxdii hore lacag aad u yar baa dul sabbaynaysay webiga, balse iminka hal nin baa helay 1,000 Rupee.”
Ilaa hadda lama garanayo halka lacagtaasi uga timi webiga, laakiin bilayska degaankaas ayaa isku dayaya inay baadhaan halka lacagtan ka timi iyo saxnimadeeda.
oo ka mid ah bilayska caasimadda ee macluumaadka khaaska ah baadha, ayaa isagu tilmaamay in baadhitaan arrintan lagu samayn doono.
“Siday doontaba ha noqotee waannu awoodnaa inaannu helno macluumaad, waxaanuna qaadi doonaa calaamad ka mid ah lacagtan si aanu bangiga ula kaashano oo u ogaano inay sax yihiin, laakiin waxaannu ka shakisanahay inay tahay lacag sharci-darro ah,” ayuu yidhi Apurba Jibon.